Izindaba - IPlastiki ayiyona imfashini: abathengi basekela uboya bemvelo, isikhumba noboya
F International Fur Association IFF Meyi 19
Kungenzeka ukuthi usanda kufunda nje umbiko wengqungquthela yabezindaba onesihloko esithi "uboya bokuvikelwa kwemvelo", futhi uyabubula "ngenqubekela phambili yezikhathi". Kepha singathatha yini imizuzu emihlanu ukwehlisa umoya futhi sibheke le "nkinga"
IWashington, DC ngo-Ephreli 22, 2021, umfelandawonye wemvelo we-fiber wakhipha isethi yemininingwane yakamuva yocwaningo lwemibono yomphakathi, ekhombisa ukuthi abantu ngokujwayelekile bakusekela ukusetshenziswa kwemicu yemvelo, kufaka phakathi noboya bemvelo. Yize kube nomkhankaso wamashumi eminyaka womkhankaso “wokulwa noboya” ngenani elincane lezishoshovu, uboya busenokwesekwa okuqinile komphakathi, okungeke kusazitshwa. Le nhlolovo entsha isekela isiphetho esesinesikhathi eside senziwa nguGallup sokuthi abangaphezu kwesigamu sabaphenduli babheka uboya "njengobamukelekile ngokokuziphatha."
Emiphumeleni yalolu cwaningo lombono womphakathi:
Abathengi abangama-61% bayavuma noma bavuma ngokuqinile ukuthi "abathengisi nabathengisi bangasebenzisa izinto ezisuselwa ezilwaneni ngokuzibophezela, njengesikhumba, uboya, uboya nosilika.".
Ama-62% omphakathi angacabanga ukuthenga ukuboya okuqinisekisiwe okunobuntu futhi okusimeme, kuyilapho kuphela u-16% engeke.
Ama-60% ayecabanga ukuthi ama-brand kanye nabaqambi kufanele bavunyelwe ukusebenzisa uboya bemvelo, kanti yi-12% kuphela engakwenzi.
Ngokombono waseChina, iChina iyindawo enkulu kunazo zonke yokucubungula uboya emhlabeni, kanye nendawo yokuzalanisa izilwane enkulu kunayo yonke emhlabeni kanye nendawo enkulu kakhulu yokusetshenziswa koboya. Imboni yoboya iyimboni efuna abasebenzi abaningi, edala amathuba amaningi emisebenzi kanye nemboni ebalulekile yokuthi abalimi bacebe futhi bathole imali. Ngaphezu kwalokho, iChina ngumphakathi othanda izinto ezibonakalayo, onamagugu ayo namasiko enhlalo, futhi abantu baseChina banomqondo ophusile wentuthuko esimeme ngokuhambisana neqiniso kanye nesisekelo senhloso.
Eminyakeni yamuva nje, eminye imikhiqizo imemezele ukuthi iyeke ukusebenzisa uboya bemvelo bese ishintshela koboya bokuzenzela. Isikhathi esithile, "uboya bokuzenzela" sebuphenduke isabizwana so "ukuvikelwa kwemvelo", futhi nohlobo lwenkulumo-ze nendlela yokumaketha yemikhiqizo ethile. Kodwa-ke, lo mkhuba uphikisana nombono womphakathi ngoboya bemvelo, futhi uphikisana nomkhuba wenhlalo wentuthuko esimeme.
Izindwangu zokwenziwa ezisuselwa kupulasitiki, njengoboya bokuzenzela, ziyimbangela ebalulekile yokungcola kolwandle. Ikhompiyutha ayinakonakala ngokwemvelo futhi izokhipha izinhlayiya zepulasitiki, amanzi angcolisayo nolwandle. Uma izindlela zamanje zokukhiqiza nokuphathwa kwemfucuza ziqhubeka, kulinganiselwa ukuthi ngo-2050, cishe amathani ayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-12 kadoti wepulasitiki uzongcwatshwa noma usatshalaliswe kuyo yonke imvelo.
Akuzona nje izilwandle kuphela ezibhekene nomthelela wokungcola okuvela embonini. Olunye ucwaningo lwe-UN ngo-2019 luphethe ngokuthi: "imfashini ibanga u-8-10% womkhathi wekhabhoni emhlabeni wonke, ngaphezu kwazo zonke izindiza zomhlaba wonke kanye nemikhumbi yasolwandle kuhlangene." Ngakho-ke, lo mkhuba wokukhuthaza "imfashini yepulasitiki" njengemfashini eluhlaza ngokungangabazeki "ikhomba inyamazane ehhashini". Kodwa-ke, izindwangu zemvelo ezizuzisa ngempela imvelo zikhohliswa abezindaba futhi aziqondwa kahle ngumphakathi ngaphansi kwezentengiso.
Ngokombono wokuziphatha, ukusetshenziswa kwezilwane ngabantu kuhambisana namaqiniso enhloso. Akukho mehluko obalulekile phakathi kwesikhumba, uboya, uvolo nezilwane ezidliwayo zabantu. ULaofoye Lagerfeld wake wathi zonke izinsolo kumele zibhekane nomsuka oyisisekelo: "u-anti fur akayona inkinga kimi inqobo nje uma abantu besadla inyama futhi besebenzisa isikhumba."
Uyini umbono wemikhiqizo yamazwe omhlaba ngoboya? Kokubili i-LVMH ne-kering kuvume iphrojekthi ebizwa nge- "Furmark" eyenziwe yi-international fur Society (IFF). Le phrojekthi izohlinzeka ngesiqinisekiso sokuvikelwa kwezilwane kanye nesitifiketi sokuthuthukiswa okusimeme eYurophu, e-United States, eCanada, eRussia naseNamibia, okuzokwenza amazinga asimeme futhi aluhlaza embonini yoboya ethembeke ngempela.
UMichelle Burke, isikhulu esiphezulu seLouis Vuitton, utshele iphephandaba lase-Italy IL sole 24 ore ukuwa okokugcina ukuthi uLouis Vuitton akazange aluyeke uhlelo lwakhe lokusebenzisa uboya. Ubalule ukuqinisekiswa kwesimilo epulazini laso, ukusebenza kwezinto, kanye nomoya wobungcweti embonini yezikhumba amakhulu eminyaka ukuchaza ukusimama koboya nesimo sayo.
I-LV Louis Vuitton 2021 uchungechunge loboya bemvelo
Uboya bemvelo bochungechunge lwe-Fendi 2021
"Ama-plastiki awasona imfashini ngonyaka ka-2021, futhi abasiki bengqephu nabathengisi abanokwethenjelwa kufanele basekele isifiso somphakathi sokusimama ngokusebenzisa izindwangu zemvelo ezisimeme kakhulu," kusho uMike Brown, umqondisi wezentuthuko esimeme nokuxhumana kwi-natural fiber alliance. Silangazelele ukuqhubeka nengxoxo yethu nabakwaSaks, Macy kanye nabanye abathengisi nemikhiqizo efuna ukwazi iqiniso. ”